I-CPU-X ne-CPUFetch: izinhlelo zokusebenza ezi-2 eziwusizo zokubona ngamapharamitha we-CPU | Kusuka kuLinux
Kungaba ngezizathu zobuchwepheshe (ucwaningo noma ukulungisa) noma ngezizathu zokufuna ukwazi nokwenza ngezifiso (Izinsuku Zama-Desktops), zomsebenzisi wekhompyutha onentshisekelo I-GNU / Linux, kubalulekile njalo ukwazi ukwazi kalula futhi nokuqapha kahle i- Amanani we-CPU kusuka kukhompyutha yakho. Futhi ngalokhu, kunezinhlelo zokusebenza "CPU-X" ne- "CPUFetch".
Ngakho-ke "CPU-X" ne- "CPUFetch" kukhona 2 izicelo ezithakazelisayo futhi ewusizo ukuthi lula ukubonisa nokuqapha amapharamitha we-CPU yanoma iyiphi ikhompuyutha, ngokuqopha nangokugcina, okusisindisela ukusetshenziswa kwezinhlelo zokusebenza ezinkudlwana njenge IHardinfo neLshw-GTK noma amanye ama-Hardware Monitors, noma izinsiza noma imiyalo yokuyala nge-terminal ukwazi imininingwane ye-Hardware yethu efana lshw, inxi kanye ne-cpuinfo.
Kusukela, lokhu okuthunyelwe kusesikhathini ukunikela Ulwazi Olwengeziwe cishe izinhlelo zokusebenza nemiyalo eshiwo ngaphambili ezigabeni ezingenhla, sizobe sesishiya amanye izixhumanisi ezivela kokuthunyelwe kwangaphambilini ukuze bakwazi ukuwahlola, ngemuva kokuqeda le ncwadi:
"IHardInfo ikhombisa imininingwane ngehadiwe elisetshenzisiwe, kepha ngokungafani ne-lshw, ibuye ikhombise amanye amaqiniso athakazelisayo ngohlelo lokusebenza, imvelo yedeskithophu, isikhathi sokusebenza, amamojula we-kernel asebenzayo, izilimi ezitholakalayo, imininingwane yohlelo lwefayela, phakathi kwabanye. Uma kukhulunywa ngemininingwane yehadiwe, lokhu akunemininingwane eminingi kune-lshw, kepha kunembile ngokubonga kusixhumi esibonakalayo sayo esihle. Ngokufanayo, i-hardinfo ivumela ukwenza izivivinyo zokusebenza okuhlukahlukene (amabhentshi)." Amathuluzi we-3 ukwazi i-hardware yohlelo lwakho
1 I-CPU-X ne-CPUFetch: i-GUI nezinhlelo zokusebenza ze-CLI ukubuka imininingwane ye-CPU
1.1 Yini i-CPU-X?
1.1.1 Ukulanda, ukufaka, ukusebenzisa nezithombe-skrini
1.2 Yini i-CPUFetch?
1.2.1 Ukulanda, ukufaka, ukusebenzisa nezithombe-skrini
I-CPU-X ne-CPUFetch: i-GUI nezinhlelo zokusebenza ze-CLI ukubuka imininingwane ye-CPU
Ngokusho kwe- Iwebhusayithi esemthethweni wohlelo lokusebenza, luchazwa ngokuthi:
"I-CPU-X isoftware yamahhala eqoqa imininingwane nge-CPU, i-motherboard, nokunye okuningi."
Ngaphezu kwalokho, inikeza imininingwane eyengeziwe efana:
I-CPU-X uhlelo lokuqapha nokufaka uhlelo (olufana ne-CPU-Z ye-Windows), kepha i-CPU-X isoftware yamahhala futhi evulekile eyenzelwe i-GNU / Linux neFreeBSD.
Ingasetshenziswa kumodi yokuqhafaza usebenzisa i-GTK noma kwimodi yombhalo usebenzisa ama-NCurses.
Kungalandwa njengamanje kufayela lakho le- Inguqulo ye-4.2, ku Amafomethi we- ".AppImage", "tar.zg" ne- "zip", kokubili kusuka kuwebhusayithi yayo esemthethweni nakuwebhusayithi yayo esemthethweni ku- GitHub.
Ngecala lethu lokusebenzisa, sizolifaka sisebenzisa i- Ifomethi ye- ".AppImage" ukuyifaka nokuyiqhuba, kalula futhi ngokushesha ku- Isistimu yokusebenza esetshenzisiwe (I-MilagrOS -> Ukuphendula kususelwa ku-MX Linux).
Njengoba kukhonjisiwe kuzithombe-skrini ezilandelayo:
Ngokusho kwe- iwebhusayithi esemthethweni ku-GitHub wohlelo lokusebenza, luchazwa ngokuthi:
"I-CPUFetch iyithuluzi lokusesha le-CPU elilula kodwa elihle."
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukugqamisa ngalokhu ithuluzi lomugqa womyalo olula (i-CLI) Okulandelayo:
Iyafana neNeofetch, kepha igxile ekutholeni nasekuboniseni ukwakhiwa kwe-CPU ku-Linux, Windows, MacOS kanye ne-Android Operating Systems.
Ibonisa ilogo yomkhiqizi (ngokwesibonelo, i-Intel, i-AMD) kanye nemininingwane eyisisekelo ye-CPU, kufaka phakathi imininingwane ebalulekile, efana nale elandelayo:
Ubuchwepheshe be-semiconductor kuma-nanometer (nm)
Inani lama-cores nemicu
Izandiso zeVector Advanced (AVX)
Hlanganisa-Phindaphinda-Faka noma Fused-Phindaphinda-Faka / FMA Imiyalo
Ubukhulu be-L1, L2, ne-L3
Okufanayo kungaba okwamanje ilandiwe futhi yafakwa nge-GIT kusuka endaweni yakho yokugcina GitHub. Futhi kuyatholakala ku- Inguqulo ye-0.94.
Ngecala lethu elingokoqobo, sizolifaka futhi ku- Isistimu yokusebenza esetshenzisiwe (I-MilagrOS -> Ukuphendula kususelwa ku-MX Linux) ukulandela imiyalo elandelayo yomyalo:
Note: Njengoba ubona, I-CPUFetch ngaphezu kwalokho kungumphelelisi omuhle kakhulu wokugubha i- Ubuso bekhompyutha NgoLwesihlanu.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «CPU-X y CPUFetch», Izicelo ezi-2 ezithakazelisayo nezisebenziseka kalula ukubonisa nokuqapha amapharamitha we-CPU kusuka kunoma iyiphi ikhompyutha, ngokuqhafaza nangokugcina; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-CPU-X ne-CPUFetch: izinhlelo zokusebenza ezi-2 eziwusizo ukubuka amapharamitha we-CPU